सेक्स गर्दा किन आवाज निकाल्छन् महिला ? -
२६ असार २०७६, बिहीबार १८:१९ 568 पटक हेरिएको
यसबारेमा केही वैज्ञानिकले आवाज निकाल्नु नाटक मात्र हो भनेका छन् भने केही अनुसन्धानकर्ताहरूले आनन्दको अनुभूति हो भनेका छन् । साथै केहीले सेक्सको समयमा महिला अचेत अवस्थामा पुग्ने भएकाले यस्तो आवाज निकाल्ने जनाएका छन् । तर यसबारे पछिल्लो अनुसन्धानबाट निकालिएको निष्कर्ष भने अलि फरक छ । सेक्सको क्रममा यदि तपाइको पार्टनर उफ आह या आउच जस्ता आवज निकाल्छ भन्दैमा तपाइले यो सोच्नु भएन कि, उनले चरम सन्तुष्टि प्राप्त गरिरहेका छन् । किनभने यो देखावटी मात्र पनि हुनसक्छ । सेक्स गर्दा किन आवाज निकाल्छन् महिला ? यस्तो छ कारण ब्रिटेनका शोधकर्ताहरूको एक सोधमा ‘२५ प्रतिशत महिला सेक्सका क्रममा आवाज निकालेर चरम आनन्द लिएको’ अभिनय गर्ने खुलासा गरेका छन्।
८७ प्रतिशत महिलाहरूले चाँहि आफ्नो पार्टनरप्रति प्रेम सम्बन्ध सुमधुर राख्नकै लागि यसरी आवाज निकाल्ने गरेको खुलाए। शोधकर्ताले यस व्यवहारको पछाडि ‘सेक्स लगायतका कार्यमा पुरुषप्रधान मानसिकता हावी भएको’ निष्कर्ष निकालेका छन् । यसैले नै महिलाहरू आफ्नो सन्तुष्टिका साथ सम्झौता गरेर पनि पुरुष पार्टनरलाई खुसी तुल्याइरहेका हुन्छन्। महिलामा आर्गज्म अधिकांशः फोर प्लेको क्रममा धेरै देखिने गरिन्छ । यस क्रममा महिलाहरू सेक्सी आवाज निकाल्ने गर्छन् । महिलाहरू यस्तो आवज त्यसवेला निकाल्छन्, जतिबेला पुरुषहरू चरमोत्कर्षमा पुगेका हुन्छन्।